Iapilkosi yasendle: Iplatifomu yobulungu ehlawulwa ngayo yonke into | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 2, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 2, 2020 Douglas Karr
Njengoko imibutho ijonge kwikamva, elinye ithuba kukwenza imibutho yobulungu ehlawulelweyo. Imibutho, engenzi nzuzo, iziseko, iiklabhu, amaqela ezemidlalo, amaqela oqeqesho, kunye namagumbi ezorhwebo konke kufuna amaqonga okulawula ubukho bawo bedijithali, indawo zonxibelelwano, iminyhadala, ukubhaliswa, imikhombandlela, kunye nevenkile ezikwi-Intanethi.
Wild Apricot kudala eyinkokeli kolu shishino, eneqonga elingaphandle kwebhokisi lokulawula naliphi na ishishini lesitayile sobulungu. Imibutho engaphezu kwama-30,000 isebenzisa ii-Apricot zasendle ukutsala, ukuzibandakanya nokugcina amalungu ayo.
Iplatifomu yobulungu be-Apricot yeQela ibandakanya:
Izicelo zobulungu -Isoftware yolawulo lobulungu be-Apricot iyazenzela ngokupheleleyo inkqubo yokwenza isicelo ukunceda ukunika amalungu akho amatsha umbono wokuqala. Sika amaphepha anzima ngokwenza i-web-based, ifom-friendly apho abafaki zicelo banokunika lonke ulwazi oludingayo kwaye bahlawule kwi-intanethi ngekhadi letyala.
Ukuhlaziywa kobulungu -Cutha umsebenzi wakho wolawulo ngokunikezela ngenkonzo yokuzenzela kumalungu: banokuhlaziya ubulungu babo kuloo ndawo ngokungena kwiprofayili yabo. Banokuhlaziya ngokukhuselekileyo ulwazi lwabo loqhakamshelwano, babhalisele iminyhadala, kwaye bahlawule amatyala obulungu kwikhompyuter yabo okanye kwifowuni yabo.
Isiseko sedatha -Amavolontiya kunye namalungu ebhodi anokufikelela kwisiseko sedatha esinye kwi-intanethi, kwaye uhlaziyo kwiirekhodi zamalungu akho lwenzeka ngoko nangoko, ke idatha yakho ihlala ihlaziyiwe. Ungangenisa ulwazi lwelungu lakho kwispredishithi kwaye wenze ngokwezifiso isiseko sedatha ukulungiselela iimfuno zakho.
Isalathiso sobulungu Nokuba uyila isikhombisi esidlangalaleni seshishini lamalungu akho, okanye wakha isikhombisi kuphela esinokubonwa ngamalungu akho, unokulawula ukuba loluphi ulwazi olubonisa isikhombisi ngasinye. Kwaye nokuba iwebhusayithi yakho yakhiwe kwi-Wild Apricot okanye kwelinye iqonga, unokufaka ngokulula imikhombandlela yamalungu ashukumayo kwiwebhusayithi yakho.
Ubulungu beWebhusayithi - Unokwenza iwebhusayithi entsha enobuhlobo ephathekayo kunye nomakhi we-Wild Apricot wokudonsa kunye nokwehla, okanye ukongeza amanqaku obulungu kwiwebhusayithi yakho ekhoyo ngokufaka iifom zesicelo sobulungu, iirejista kunye noluhlu lweminyhadala njengamawijethi. Ewe kunjalo, indawo ibandakanya zombini iibhloko kunye neeforamu zokubandakanya amalungu akho.
Amaphepha aMalungu kuphela -Ungakha ukubandakanyeka kwamalungu ngokunikezela ukufikelela kumalungu ewebhu kuphela, njengeeforamu zenethiwekhi kunye neebhloko ezifanelekileyo. Unokwenza kwakhona ukuba ngawaphi amanqanaba amalungu okanye amaqela ofuna ukufikelela kuwo kwiphepha ngalinye.
Ulawulo lweMicimbi -Ubhaliso lomsitho okwi-Intanethi luthatha ubunzima ngaphandle kwemicimbi ebalekayo Ngaphakathi kwimizuzu unokwenza udweliso lomsitho olunenkcazo kunye nemifanekiso, kunye nefom yobhaliso lomsitho okwi-Intanethi. Iziganeko zakho ziya kudweliswa ngokuzenzekelayo kwikhalenda kwindawo yakho yeWild Apricot okanye iwebhusayithi esele ikho ngenxa yoko akufuneki uphinde ufake ulwazi, kwaye amalungu akho anokujonga umcimbi kwi-intanethi kwifowuni yakho okanye ikhompyuter.
Iintlawulo ezihambelana nePCI Isoftware ye-Wild Apricot yokuqhubekeka nokuhlawula isoftware isusa intloko ekufumaneni nasekulandeleleni iintlawulo kunye nokulawula iimali zombutho wakho. Amalungu akho kunye nabaxhasi banakho ukuhlawula kwi-Intanethi kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo kwiifizi zobulungu, iifizi zobhaliso, kunye neminikelo, okanye basete iintlawulo eziphindaphindwayo ukugcina ixesha kunye nobunzima. Unako ukuseta iirhafu ezininzi zentengiso okanye iVAT ngonqakrazo nje olumbalwa, kwaye uzisebenzise ngokuzenzekelayo kwintengiselwano ekwi-intanethi kuyo nayiphi na indibaniselwano oyikhethayo. Iintlawulo zee-Apricot zasendle zixhotyiswe yi-AffiniPay, umboneleli wezisombululo zokuhlawula onamava ali-15.
Ukuthumela imali Nje ukuba intlawulo ye-Intanethi iqinisekiswe, irekhodi yentlawulo yenziwe ngokuzenzekelayo, kwaye i-invoyisi enxulumene nayo iyahlaziywa. Unokuseta ezinye izinto ezinokubangela, kubandakanya ukwenza ubulungu okanye ukuthumela ii-imeyile ezamkelekileyo, iirisithi zobhaliso lomsitho, okanye iziqinisekiso zomnikelo.
Ukunika ingxelo ngezemali Ngeengxelo zemali zeWild Apricot, unokufumana umfanekiso opheleleyo wezezimali zombutho wakho ngaphandle kokufuna ispredishithi. Unokurekhoda iintlawulo ezenziwe ngemali ezinkozo kwaye ujonge kwi-Wild Apricot kunye neentlawulo ezenziwa kwi-Intanethi, ke yonke idatha yakho yokuhlawula ikwindawo enye. Ungathumela kwakhona idatha yakho yezemali kwi-Excel okanye kwi-QuickBooks.
Iminikelo ekwi-Intanethi -Jika iwebhusayithi yakho ibe sisixhobo esinamandla sokwenza imali. Ngokusebenzisa isoftware yethu yokwenza intlawulo kwi-Intanethi ungaseta ngokulula iphepha leminikelo kwiwebhusayithi yakho, ukuze iindwendwe kwindawo yakho zikwazi ukubonelela ngenkxaso yemali oyifunayo naphi na apho bakhoyo.
email Marketing -Yakha ii-imeyile ezijongeka njengezobuchwephesha kwiitemplate zethu ezinobuhlobo eziselfowuni kwaye uthumele inani elingenamda lee-imeyile. Shicilela ifomu yokubhalisa kwiphepha lewebhu kwiwebhusayithi yakho, okanye ujolise kwii-imeyile zakho ngokwenza uluhlu lwabamkeli ngokusekwe kuyo nayiphi na imeko, enje ngobume bobulungu okanye ukuya kumsitho. Unokulandela umkhondo wokuba isebenza njani na imikhankaso yakho ye-imeyile eneenkcukacha-manani ekuhanjisweni, kuvulwe, kunye nokunxibelelana okucofwe kuwo wonke umyalezo nakulo lonke unxibelelwano.
Ii-imeyile ezizenzekelayo Sebenzisa ixesha elincinci ukuthumela ii-imeyile ngesandla ngokumisela iziqinisekiso ezizenzekelayo ze-imeyile kunye nezikhumbuzo zobulungu, iminyhadala kunye neminikelo. Unokuqinisekisa ukuba amalungu akho asafumana amava ahambelana nokwenza imiyalezo ngendlela efanelekileyo kunye nokusebenzisa ii-imeyile ezinkulu (ezifanayo nokudibanisa imihlaba).
Umlawuli weSoftware -Ukulawula ii-invoyisi kunye nokurekhoda iintlawulo kwifowuni yakho kunye nesoftware yasimahla yeWild Apricot yabalawuli. Kwimisitho, ungalawula abafowunelwa kunye nokungena kubhaliso lweziganeko kwifowuni yakho.
Iziganeko usetyenziso lweSoftware -Nceda amalungu akho aqhagamshele omnye komnye okanye uluntu ngokubanzi ngokusebenzisa iirejista zamalungu ezininzi ezisoloko zihlaziyiwe.
Iplagi yeWordPress kunye nokuNgena ngokuNye -Ukuba usebenzisa indawo yeWordPress, unokusebenzisa i-Wild Apricot ukusayina ungene, ukuhambisa iiwijethi, kunye nokutshixa umxholo wamalungu kuphela.
Zama i-Apricot yasendle yasimahla kangangeentsuku ezingama-30
Ukubhengezwa: Ndililungu le Wild Apricot
tags: ulawulo lombuthomibuthoulawulo lweklabhuiiklabhueCommerceubhaliso lomsithoulawulo lwesisekoizisekeloiqonga lobulunguisoftware yobulunguulawulo olungenzi nzuzoiingeniso-ngenisoamaqela ezemidlaloulawulo lwezemidlaloiqonga lewebhusayithi yoqeqesho